नेतृत्वले गल्ती नसच्याए, बहुमतले नेतृत्व फाल्छ : थापा
एमाले निकट राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठन यति बेला विवादमा फसेको छ । संगठनलाई विधि र विधान विपरित चलाएको भन्दै उपाध्यक्ष मदन आचार्य समुहले बैठक बहिस्कार गरि छुटै भेला आयोजना गरेका छन् । उनीहरुले नेतृत्व मनोमानी ढंगले अघि बढेको भन्दै नेतृत्व नसुध्रिए जस्तो सुकै निर्णय गरेर पनि अघि बढ्न तयार रहको बताउदै आएका छन् । संगठन भित्रको विवाद र त्यसको समाधानका उपायका विषयमा संगठनका उपाध्यक्ष एवं असन्तुष्ट समुहका एक सदस्य योगेन्द्र थापासँग गरिएको कुराकानी :
तपाईहरुको संगठन भित्रको विवाद के हो ?
संगठन विधि र विधान अनुसार चल्नुपर्छ । केही साथीहरुले अझ त्यसमा पनि नेतृत्वले त्यसलाई लत्याएर हिटलर प्रवृत्ती देखाएपछि आन्तरिक रुपमा केही कुरा नमिलेको मात्र हो । यो विवाद २ वर्ष देखि चलिरहेको थियो तर विगतमा जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट गरेर हामी महाधिवेशनमा गएका थियौ । तर अहिले आएर त्यो एग्रिमेन्टनै भएको छैन भन्दै हिड्ने र संगठनको विधि र विधानलाई मिचेर मनोमानी रुपमा अगाडि बढ्ने कार्यहरु भइरहेको छ । त्यसकारण विवाद उत्पन्न भएको हो ।
नमिलेको कुरा चाही के हो ?
केही समय अघि एउटा बैठक आह्वान गरिएको रहेछ । त्यो बैठक बारे सबै साथीहरुलाई खबर गएन । बैठकको एजेन्डा केन्द्रिय सदस्य थप गर्ने विषयमा थियो । त्यसकारण मैले अध्यक्ष र महासचिवलाई फोन गरेर बैठक बस्नु अघि एक किसिमको वामवाक मिटिङ गरौ भनेको थिए । हामीले पार्टीको जस्तो काम गर्ने होइन् । संगठनका रुपमा काम गर्नुपर्छ व्यवसायका कुरा बढी राजनीति कम गर्ने गरि जानुपर्छ त्यसकारण सहजिकरणका लागि बैठक गरौ भनेको थिए । तर अध्यक्षले मानेमान नमाने गोली हान्छौ भने जस्तो गरेपछि हामीले बैठकमा नजाने निर्णय गरेका हौ । ३५÷४० जना बैठक बसेर मनोमानी निर्णय गरेर घरघरमा गएर माइन्यूटमा साइन गराएर निर्णय लाद्न खोज्नु भएको छ । जुन हामीलाई मान्य छैन् ।
बैठकको बारेमा जानकारी नै नभएका साथीहरुलाई संगठनबाट विदाई गरिएको छ । विधान त तीन पटक सम्म बैठकमा अनुपस्थित हुने केन्द्रिय सदस्यलाई हटाउन मिल्ने व्यवस्था छ तर यो बैठक नै दोस्रो पटक बस्दै छ ।
चाडपर्वका बेला बैठक राखेर मिचाह प्रवृत्ती जो गरिएको छ । त्यसको विरुद्ध हामी शसत्त रुपमा उत्रन्छौ ।
तपाईहरुले छुटै बैठक आह्वान गरेर गर्न खोजेको चाहि के हो ?
हामी बैठकमा सहभागि नभएका साथीहरु बीच अव कसरी अगडि बढ्ने भनेर छलफल गरेका हौ । उहाँहरुले जे गर्नु हुन्छ हामीले त्यही मान्दै जानुपर्छ भन्ने छैन् । त्यसकारण हामी उहाँहरुको दादागिरी विरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गरिरेहका छौ ।
नेतृत्वको कमजोरी के हो ?
हाम्रो विवाद कार्यशैलीको हिसाबले हो । विवाद एउटा परिवारका बाबु छोराका विचमा पनि हुन्छ तर छोराको कुरा बाबुले सुन्न तयार हुनुपर्छ । नेतृत्वले सबैको कुरा सुनिदिनुपर्यो । हामीले पटक पटक आफ्ना कुराहरु राखिरहेका छौ । तर त्यो कुरा नसुनी आफ्नो कुरा मात्र लाग्दे प्रबृती ठिक हुदैन् । विवादित विषयलाई छलफलबाट समाधान गरौ । हामीले पटक पटक भनेका छौ तर उहाँहरु हाम्रो कुरा सुन्न तयार नै हुनुहुन्न् ।
तपाईहरु छुटै संगठन निर्माणका लागि तयार हुनुभएको हो ?
हामी अहिले त्यो सोचमा छैनौ । संगठन भित्रैका बहुमत साथीका विचमा आवश्यक छलफल गरिरहेका छौ । नेतृत्वले गल्ती नसच्याए हामी बहुमत सदस्य बसेर एउटा निर्णय गछौ र हाम्रो निर्णय उनीहरुलाई मान्न बाध्य बनाउ छौ । त्यो निर्णय भनेको नेतृत्वको विरुद्धमा आउने छ ।